बिहेपछि श्रीमान को घरमा राज गर्ने यी ४ रासी भएका महिला हरु जानिराखौ ! »
बिहेपछि श्रीमान को घरमा राज गर्ने यी ४ रासी भएका महिला हरु जानिराखौ ! शा’स्त्रका अनुसार यी रा’शि भएका म’हिलाहरूले आफ्नो श्री’मानको खासै कुरा न’सुन्ने आफ्नै मर्जी च’लाउने, दा’म, साम, द’ण्ड’भेदको समेत प्रयोग गर्ने गर्छन् । घर प’रिवारमा हुने हरेक प्रकारको निर्ण’यमा पनि आफ्नै राज गर्ने ‘अरूको कुरा नसुन्ने र दे’खावटी गर्न मन पार्ने भएका का’रण यस राशि भएका म’हिलाहरू अरूलाई दे’खाउनको लागि भएता पनि काम भने गर्ने ग’र्दछन् । नेतृत्व भूमिका निभा’उने खुबी हुने गर्दछ भने परि’वारमा हुने हरेक का’र्यमा समेत अ’गाडी हुने भएका कार’ण परिवारमा यस राशि भएका बु’हारीहरूले राज गर्ने गर्छन् ।
मिथुन राशि : मिथुन राशिका युवती झट्ट हेर्दा निकै सुन्दर तथा आकर्षक मानिन्छन्। यिनीहरूको स्वभावले पुरुषहरूलाई सजिलै आकर्षक गर्ने गर्दछ। यिनीहरूको पुरुष साथी अधिक हुन्छन् । महिला मित्रहरू पनि कम हुँदैनन्। यो राशिका युवतीमा अर्काको मनको कुरा बुझ्ने अलौकिक क्षमता हुन्छ। यिनीहरू बहुमुखी प्रतिभाका धनी तथा चलाखीपूर्ण तरिकाले काम गर्ने खालका हुन्छन्। यिनीहरू दिमाग लगाउनुपर्ने वा बुद्धिसँग सम्बन्धित काममा बढी सफल हुन्छन्।
एजेन्सी : सास्त्रका अनुसार यस्ता व्यक्तिको हातमा कहिले पनि पैसा टिक्दैन जानिराखौ : शास्त्र मा लेखिए...